Abacre Mkpọsa Point nke ire (naa) - isi Page
Abacre Mkpọsa Point nke ire
Abacre Mkpọsa Point nke ire (naa)
Iru akara na nke a ọzọ ọgbọ mkpọsa management software!
Download zuru-apụta 30-ụbọchị ikpe mbipute ( 6,94 MB)
Top 10 ihe ịzụta Abacre Mkpọsa Point nke ire
View niile enọ.
Abacre Mkpọsa Point nke ahịa bụ ọgbọ ọhụrụ nke mkpọsa management software maka Windows. Ọ bụ zuru ngwọta nke mkpọsa: na iwu, ịgba ụgwọ, azụ, atọ ndị yiri nkata na ọrụ Ponseti. Ojii interface na-ọma kachasị n'ihi na elu ọsọ ọsọ ọsọ nke a ahịa si ka na mgbochi nke nkịtị ndudue. Ọ mere maka iji na otutu kọmputa, na e nwere pụrụ ịdabere na ala ikike na ọkwa.
N'ihi na ndị njikwa, e nwere bụ ọgaranya set nke kọrọ na-egosi na a zuru foto nke mkpọsa arụmọrụ: ahịa site nyere oge, awa nke elu ibu, z-si, na aka atọ ndị yiri nkata, ihe kasị ike ọrụ, ịkwụ ụgwọ ụzọ, na akpaka ụtụ isi calculations.
Site standardizing dum mkpọsa management usoro, software na-eme ka mma iji gị ọrụ 'oge na ume n'ịgbanwe mee gị ntụgharị na uru n'akụkụ peeji.